Ahoana ny fomba hanatrehana ny fihaonambe bilaogy $ 2,000 $ 49 | Martech Zone
Ahoana ny fomba hanatrehana ny fihaonambe bilaogy 2,000 $ amin'ny $ 49
Alarobia, Jolay 16, 2008 Alahady Oktobra 21, 2012 Douglas Karr
Misy fihaonambe fanaovana bilaogy vitsivitsy izay mitranga manerana ny firenena isan-taona. Ny sandan'ny fanatrehana fihaonambe fanaovana bilaogy dia goavana, mampiharihary anao amin'ny alàlan'ny fanatsarana motera fikarohana, fanoratana kopia, teknolojia bilaogy ary ny fomba hahatonga ny bilaoginao hanana traikefa mahasoa. Izany no mahatonga ny mpanatrika marobe mandoa $ 2,000 mahery hanatrika ireo fihaonambe ireo.
Tsy mila mandoa 2,000 $ anefa ianao! Ahoana ny fandehan'ny $ 49?
Ireo bilaogera ao an-toerana manerana an'i Indiana dia hiangona ao amin'ny IUPUI Campus Center amin'ny 16-17 Aogositra 2008, ho an'ny Blog Indiana 2008, fihaonambe fanaovana bilaogy sy media sosialy mandritra ny 2 andro izay mikendry ny hampiroborobo ny fanabeazana, ny fanavaozana ary ny fiaraha-miasa eo amin'ny vondrom-piarahamonin'ny bilaogy mitombo haingana any Indiana. Ny konferansa dia tohanan'ny IU School of Informatics.
Ny Blog Indiana 2008 dia kaonferansa mandritra ny 2 andro na ho an'ny mpitoraka bilaogy efa za-draharaha na koa. Ny session dia hampiditra lohahevitra toa ny fitorahana bilaogy ho an'ny vao manomboka, ny fampiasana bilaogy amin'ny orinasanao, ny fanangonam-bola amin'ny bilaoginao, ny fanaovana bilaogy politika ary ny lohahevitra mandroso kokoa. Taloha, ny ankamaroan'ny kaonferansa mifandraika amin'ny bilaogy sy teknolojia dia lafo loatra na any ivelan'ny fanjakana. Blog Indiana 2008 dia mitady hitondra valan-dresaka lafo vidy sy lafo vidy ho an'ireo bilaogera Hoosier.
Ny mpianatra, ny fialamboly ary ny matihanina dia entanina hanatrika tamba-jotra sy hianatra. Ny traikefa amin'ny fanaovana bilaogy na media sosialy dia tsy takiana raha te handray anjara; izay rehetra liana amin'ny haitao sy haino aman-jery vaovao dia tongasoa eto.
Voafetra ho an'ny mpanatrika 200 ny seza.
The Ivontoerana Campus IUPUI ao amin'ny Campus IUPUI any Indianapolis, IN
Fa maninona no $ 49?
Izay ny fanontaniana an-tapitrisany dolara, marina? Ity fihaonambe ity dia tsy resaka fandoavana sarany be loatra ho an'ireo mpitoraka bilaogy A-list. Izy io dia momba ny andiana matihanina eto amin'ny faritra manandrana manampy ny olon-kafa hanomboka an'ity asa ity amin'ny Media sosialy sy bilaogy. Izy io koa dia momba ny fampifandraisana antsika rehetra izay mibilaogy amin'izao fotoana izao. Tsy isalasalana fa handao anao amin'ity fihaonambe ity ianao miaraka amin'ny torohevitra sy fahatsiarovana $ 2,000 - fa tsy ny vola no resahina.
Misoratra anarana raha mbola misy seza sisa!
Register Today! Voafetra ny seza ary mandeha haingana izy ireo.
Tags: bilaogy indianafihaonambe fanaovana bilaogyhetsikaIndianahetsika marketing
Mandria am-piadanana, ry namako Mike
Fomba mora hanatsarana ny fahaizan'ny tranokalanao
Haino aman-jery telo vato
16 Jul 2008 amin'ny 8:51 PM
Mahatalanjona ity. Azo antoka fa manome aingam-panahy ahy hieritreritra ny fomba mety hiasan'ny fihaonambe Mid-Atlantika mahafinaritra miaraka amin'ny tanjona mitovy amin'izany. Misy oniversite mendrika iray kilaometatra vitsivitsy miala ny lalana (UVA)… hmmm. Sarobidy amiko ny mitsambikina ao anaty fiara ary mitondra any Indiana noho io vidiny io.
21 Jul 2008 amin'ny 9:08 PM
Azoko antoka fa ho mafy ny fihaonambe! Lahatsoratra tsara! Niresaka tao amin'ny bilaogera aho ka diso ny fandefasana ny bilaogy Indiana tamin'ny herinandro lasa teo - tsy maintsy mandefa izany amin'ity herinandro ity!
Manantena ny hihaona aminao any!